DHAGAYSO- Madaxweyne Farmaajo ‘Sidee Adigoo Nool Dhulkaaga looqaadanayaa’ | Baahin Media
DHAGAYSO- Madaxweyne Farmaajo ‘Sidee Adigoo Nool Dhulkaaga looqaadanayaa’
May 28, 2019 - jawaab
Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maalmo kadib si dadban kaga hadlay hadal heyn ka dhalatay qariidad wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia soo bandhigtay, taasi oo Soomaaliya gabi ahaanba laga dhigay inay ka tirsan tahay dalka Ethiopia.
Madaxweyne Farmaajo isaga oo la hadlayay Jaaliyadda dalka Koonfur Africa ayuu ka hadlay hadal heynta ku aadan in dowladda Ethiopia ay dooneyso inay qaadato Soomaaliya.
“Mararka qaar waxaad maqleeysaa kuwa dhahaya dhulkeena dowlad heblaayo ayaa qaadaneysaa,war side adiga oo nool dhulkaaga loo qaadanayaa,adigu hadaad is dhiibto ama aad dhimato waa la qaadanayaa laakin adiga oo nool maya,war ha is dhiibina oo kalsooni lahaahda” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa raali gelin kabixisay sawir u muuqday qorshe Ethiopia ku fakareysay sanado badan oo si aan ku talo aheyn loogu soo daabacay Bogga wasaaradda arrimaha dibadda.
Dadka falanqeeya arrimaha diblumaasiyadda ayaa sheegaya in sawirkii wasaaradda Arrimaha dibadda Ethiopia soo daabacday inuu yeelan karo micno badan, islamarkaana uu xambaarsanaa fariimo kale.
Waxaa jirta colaad soo jireen ah oo u dhaxeysa labada dowladood, waxaana Ethiopia ay mar walbaa aheyd tan iyo burburkii wadan saameyn iyo faragelin ku leh siyaasadda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa laga sugayay jawaab culus, balse wasiirka arrimaha dibadda MB-Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inay arintaasi uu kala hadlay dhigiisa Ethiopia.